Trump oo sheegtay in lasiiyay abaalmarin aan jirin - Tilmaan Media
Qoraal uu ku faafiyay bartiisa twitterka madaxwaynaha maraykanka Donuld Trump ayaa sheegay in dadka reer Kuuba-Ameerikaanka ah ay gudoonsiiyeen abaalmarinta loo yaqaan “Bay of Pigs Award”.
Laakiin siduu xisbiga jamhuurigu Trump lama guddoonsiin abaal marin ee wuxuu taageero kahelay naadi ay ku midaysan yihiin dad kuubaan ah. Xilligii uu ku guda jiray ololalihiisii doorasho ee sanadii 2016.
Wargayska The Guardian ayaa sheegay in sababta uu Trump usoo hadal qaaday abaal marintaan ay tahay isagoo doonaya inuu soo jiitto cod bixiye yaasha kasoo jeeda Laatiin Ameerika.
Sidoo kale The Guardian waxay sheegtay in Trump uu caan ku yahay sheegashada abaalmarino iyo billad sharafyo uusan qaadan. Arrintaan ayuu Trump uga dan leeyahay in uu ku marin habaabiyo aragtiyada dadwaynaha.